The government of Myanmar has issued advisory statements to close all Pre-school classes temporarily - BFI Education Services
17MarJune 24, 2020
As you are aware World Health Organization (WHO) has declared COVID -19 asapandemic and the government of Myanmar has issued advisory statements to close all Pre-school classes temporarily.
Following the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement statement, we are closing our Pre-school classes from the 17 th March 2020 to 30 th April 2020 asasafety measure for our valued children. During this period, we will be moving to online teaching and we have already obtained two relevant online platforms for continuous learning.
We believe these measures will be temporary and you will be updated regularly regarding the commencement of regular classes.
Please do not hesitate to contact our office for further clarifications.
ကမ်ာဘ့ကနျြးမာရေးအဖှဲ့ကွီး WHO မှ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါကွီးအဖွဈ သတျမှတျလိုကျသော ကူးစကျမွနျ COVID 19 ကာကှယျနိုငျရေးအတှကျ မူကွိုကြောငျးမြား အပါအဝငျ ကြောငျးမြားအားလုံးအား ဧပွီလကုနျအထိ ခတ်ေတ ပိတျထားရနျ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံတျောအစိုးရမှ ညှနျကွားသတျမှတျထားပွီး ဖွဈပါသညျ။ အဆိုပါ ညှနျကွားခကျြနှငျ့အညီ ကြောငျးများအား ၁၇.၀၃.၂၀၂၀ မှစတငျကာ ဧပွီလ ၃၀ အထိ ခတ်ေတ ပိတျထားမညျ ဖွဈပါသညျ။
ကြောငျးပိတျထားသောကာလအတှငျး ကလေးငယျမြား မိဘအုပျထိနျးမှုအောကျတှငျ စဉျဆကျမပွတျ ဆကျလကျလလေ့ာသငျယူနိုငျစရေေးအတှကျ ကြောငျးဘကျမှ လိုအပျသညျ့အစီအစဉျမြား အစှမျးကုနျ စီစဉျပေးနိုငျရနျအတှကျ ထပျမံအကွောငျးကွား အသိပေးသှားပါမညျ။ ခတ်ေတကြောငျးပိတျရမညျ့ကာလအတှကျ ပွနျလညျအစားထိုး သငျကွားပေးနိုငျရေးအတှကျလညျး စီစဉျပေးသှားမညျဖွဈပါသညျ။
ကလေးငယျမြား၏ လုံခွုံစိတျခရြရေးအတှကျ မလှဲမရှောငျသာ ခတ်ေတ ကြောငျးပိတျရခွငျးအပျေါ မိဘမြားက နားလညျမညျဟု ယုံကွညျပါသညျ။ ကလေးငယျမြား၏ ပညာရေး နှငျ့ လုံခွုံစိတျခရြရေးအတှကျ ကြောငျးနှငျ့ ပူးပေါငျးကူညီပေးကွမညျ့အတှကျ အထူးပငျ ကြေးဇူးတငျပါသညျ။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO မှ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါကြီးအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သော ကူးစက်မြန် COVID 19 ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် မူကြိုကျောင်းများ အပါအဝင် ကျောင်းများအားလုံးအား ဧပြီလကုန်အထိ ခေတ္တ ပိတ်ထားရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ညွှန်ကြားသတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ ကျောင်းများအား ၁၇.၀၃.၂၀၂၀ မှစတင်ကာ ဧပြီလ ၃၀ အထိ ခေတ္တ ပိတ်ထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းပိတ်ထားသောကာလအတွင်း ကလေးငယ်များ မိဘအုပ်ထိန်းမှုအောက်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဆက်လက်လေ့လာသင်ယူနိုင်စေရေးအတွက် ကျောင်းဘက်မှ လိုအပ်သည့်အစီအစဉ်များ အစွမ်းကုန် စီစဉ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ထပ်မံအကြောင်းကြား အသိပေးသွားပါမည်။ ခေတ္တကျောင်းပိတ်ရမည့်ကာလအတွက် ပြန်လည်အစားထိုး သင်ကြားပေးနိုင်ရေးအတွက်လည်း စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးငယ်များ၏ လုံခြုံစိတ်ချရရေးအတွက် မလွှဲမရှောင်သာ ခေတ္တ ကျောင်းပိတ်ရခြင်းအပေါ် မိဘများက နားလည်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ကလေးငယ်များ၏ ပညာရေး နှင့် လုံခြုံစိတ်ချရရေးအတွက် ကျောင်းနှင့် ပူးပေါင်းကူညီပေးကြမည့်အတွက် အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
by webdevin BFI News